လက်ရှိအချိန်မှာ, ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဓိက sputtering ပစ်မှတ်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများသည် aluminium alloy sputtering ပစ်မှတ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုသုံးသည်. ဆေးဖြန်းပုံသွင်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သိသလောက်ပုံသွန်း/ပုံသွင်းနည်းများမှာစိုးရိမ်သည်, aluminium alloy sputtering ပစ်မှတ်များကိုထုတ်လုပ်နေစဉ်, အလွိုင်းဒြပ်စင်များထည့်သွင်းခြင်းသည်အလူမီနီယံအလွိုင်းအလွင့်များအားပစ်မှတ်များကိုခွဲခြားစေသည်, ၎င်းသည် sputtering ဇာတ်ကားများ၏အရည်အသွေးကိုပိုမိုဆင်းရဲစေသည်။, ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ဂုဏ်သတ္တိများ၏တူညီမှုကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအလွန့်ကိုပစ်ခြင်းကိုသိသောဖြန်းခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်, အထက်ဖော်ပြပါဆက်စပ်အားနည်းချက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သော်လည်း, ၎င်းသည် sputtering ပစ်မှတ်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်မြင့်တက်လာသည်, အထူးသဖြင့်ပုံသွင်းရန်မလွယ်ကူသော sputtering ပစ်မှတ်အချို့ကိုပြုလုပ်သည့်အခါပူပြင်းသည့်ညီမျှခြင်းကိုသုံးရမည်, hot equalization ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်.
တိုက်တေနီယမ်-အလူမီနီယံအလွိုင်းပစ်မှတ်များထုတ်လုပ်မှုကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်အတွက်, ဤတွင်ဓာတ်ငွေ့ဖြန်းအမှုန့်ဖြင့်အလူမီနီယံအလွိုင်းအလွိုင်းအလွင့်ပစ်မှတ်များကိုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. sputtering target ၏ကုန်ကြမ်းမှုန့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အလွိုင်းအမှုန့်ကိုသင့်တော်သောအမှုန်အမွှားအရွယ်အစားရရှိရန် sieve ပြုလုပ်ထားသည်, နောက်ဆုံးတွင်အမှုန့်ကိုလေဖြန်းအမှုန့်ဖြင့် aluminium alloy sputtering target ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဤနည်းလမ်းကိုလေဖြန်းအမှုန့်ဖြင့် aluminium alloy sputtering ပစ်မှတ်များပြုလုပ်ရာတွင် aluminium alloy sputtering ပစ်မှတ်အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးချနိုင်သည်။ (အလူမီနီယမ်-ခရိုမီယမ်, အလူမီနီယံ-ဆီလီကွန်-ကြေးနီ, အလူမီနီယမ်-တိုက်တေနီယမ်, စသည်တို့). ဦး စားပေးအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဆင့်များမှာ: aluminium alloy sputtering ပစ်မှတ်များပြုလုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုအရည်ပျော်သတ္တုသို့အရည်ပျော်အောင်သတ္တုကုန်ကြမ်းများပံ့ပိုးပါ; ပြီးတော့, အရည်ကျိုထားသောသတ္တုမှသတ္တုမှုန့်ပြုလုပ်ရန်ဓာတ်ငွေ့ဖြန်းနည်းကိုသုံးပါ; နောက်ဆုံးတော့, အလူမီနီယံအလွိုင်းအလွပ်ကိုပစ်မှတ်ထားသောအရာများအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားသောလေဟာနယ်နှင့်အတူသတ္တုမှုန့်ကိုအပူပေးပါ, ဤနည်းလမ်းသည်ပစ္စည်းခွဲခြားခြင်းနှင့် microparticles များ၏ချို့ယွင်းချက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်, အရည်အသွေးမြင့် sputtering ပစ်မှတ်များကိုလျင်မြန်။ စျေးသက်သာစေပါ.
Prev: Sputtering ပစ်မှတ်များကိုလှည့်ပတ်သောအပူဖြန်းခြင်းအကြောင်း
Next: ပစ်မှတ် sputtering ပစ်မှတ်အလတ်စားကြိမ်နှုန်း magnetron sputtering ၏အသိပညာကိုရှင်းပြပါ